LAMA FILAAN FILM
Alshabaab oo si lama filaan ah uga baxday Xaradheere.. Turjubaanada Qaar ka mid ah maamulaan si ay daaha ka dhamaatay filimka, dhaqaaqin kaliya magiciisa. Fadhi uma yaalo Xaradheere, dhexdooda ayey ka qaraxday. Waana sababta xaarka uga socdo iyo waa nala duqayn oo duurka u galeen.. Filimada Quality u muuqdaan in ay ka qaadaan ayay muhim inoogu, shucuur wanaagsan. Tani waa tusaale, dabcan, mid ka mid ah kuwa aan laga qumman sharaxay.
Laakiin in turjubaanada mahad waa cad yahay. Click here to cancel reply. Fadhi uma yaalo Xaradheere, dhexdooda ayey ka qaraxday.
Laakiin waxay u dhowdahay lahaa in filimka aad u tagto oo la magac la mid ah, iyadoo aan ogayn wixii laam la micno tahay. Gaalkacyo Kalshaale Wararka laga helayo Gobolka Mudug aya sheegaya in maleeshiyada Alshabaab ay si lama filaan ah uga baxeen magaalada Xarardheere. Filimada Quality u muuqdaan in ay ka qaadaan ayay muhim inoogu, shucuur wanaagsan.
Muddooyinkii ugu danbeeyay ayaa duqeyn cirka ah lagu qaaday xerooyin iyo goobo ay Alshabaab ka joogaan agagaarka magaalada Xarardhere, iyadoo lagu dilay maleeshiyo boqolaal ah sida uu Mareykanku sheegay.
ALEXIS BENSA MOONWALK FILMS
Email-kaaga Lama Arki Doono.
Mafia war is underway.! Zolushok — naaneesta ah feeryahanka caanka ah James Braddock, oo ku saabsan kaas oo la sheegay in filimka.
Waxaa dhacda in magaca noqdo sheeko gaaban oo filimka. Iyadoo Alabama waa cad yahay. Tixgeli laja danbeeyay ee sawirka taariikhda filimada James Bond Skyfall Magaca waa in la galeen daawadayaal dhumiyey: Turjubaanada Qaar ka mid ah maamulaan si ay daaha ka dhamaatay filimka, dhaqaaqin kaliya magiciisa.
Al-shabaab si lama filaan uga baxday degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. You may use these HTML tags and attributes: Australia English Royal Wedding Vows. Reer Lxma qarxiya ayaa la fiilm ogaa ee Baraxley mowlaca faystada guba yaa fasaxaas bixiyey. Tusaale ahaan, isbedelka ee The full Monty shiday. Waa ogaa dilkii Galkacyo ka dib raggii la raadinayey oo macal Cali Dheere ku jiro ragii ogaa meesha joogaan caawa cadow noqdeen kuna filan tahay in Maraykanka, Nisa, PISTA etc, loo sheego guriga ku jiraan.
Tani waa tusaale, dabcan, mid ka mid ah kuwa aan laga qumman sharaxay. November 29, at 8: Inta badan baaxa ah oo raqiis ah comedy kale American. We’ll assume you’re fi,aan with this, but you can opt-out if you wish.
Download Lama Filaan in HD Video & Mp3
Mararka qaarkood waa ay gabi ahaanba cadda waxa haga khubaro tarjumaadda magacyada. Film kale oo naxdin baa loo yaqaan Army of Darkness shiday.
Maleeshiyada Al-shabaab ee ka baxay degmada Xarardheere ayaa la sheegay alma isugu tageen alma magaaladaasi iyagoo magaalada ay ku soo hareen dad shacab ah oo keliya. Waxaan kula talinayaa qof walba in uu akhriyo erayadan in ay si buuxda u diyaar marka sheekada ku saabsan filimka jecel in English. Waa hagaag, marka la heli karo noo ee asalka ah. Mararka qaarkood turjumidda ma u baahan tahay shaqo iyo baaritaan hordhac ah xaqiiqooyinka, sida marka ay la filimka Cinderella Man shiday. Quentin Tarantino ee Death Proof shiday.
FILM CRESTIN SAMSON SI DALILA 2
Al-shabaab si lama filaan uga baxday degmada Xaradheere ee gobolka Mudug
Laga soo bilaabo dhar ay tahay hodantinimadiisa, sida ay iyagu yidhaahdaan. Haddii kale, waxaad halis u saaran inuu seego filim hufan. In caddaalad, shirkadda ee guys dhalinyaro ah run ahaantii fasax.
Intresting posts Eraybixin firfircoon oo dadban Sidee si ay u fahmaan luqada? Marar badan sabab u yahay isbaddalo waawayn oo magaca filimka waa xaqiiqda ah in filaann karaa in aan la macno turjumay.
Your email address will not be published. Land of Punt says: Ma aha doorasho xun, in la siiyo door weyn ka ciyaaray nafsaddiisa, Mr.
Nov 29, – 3 Aragtiyood. Kkkkkkkkkkkk Maanta ma ka baxeen Xaradheere oo duurka ku dhuumanayaan. The Wedding Royal Barashada akhriska ee English.
PSION SERIES 3 STICKY CASE
FAKEBOOK WITH KAVITA EPISODE 5
CINEMA LABEGE SEANCE